Caadi ah: 5 Waddooyin si aad u sarayso falanqayntaaga SEO iyadoo la adeegsanayo Webka
Internetku wuxuu ka kooban yahay talo ku saabsan SEO. Iyadoo leh shabaq , waa suurtagal in la baddalo website-yada tartamayaasha ah si loo dejiyo istaraatiijiyadaha si ay uga baxaan. Haddii ay tahay inaad xoqdo sumadaha cinwaanka, sharaxaada meta ama ereyada muhiimka ah, waa inaad isticmaashaa mid sax ah xargaha xargaha si aad u hesho shaqadaada.
Waa kuwan 5 siyaabood oo kala duwan oo lagu maareynayo falanqaynta SEO-yadaaga oo la duubayo webka.
1. Falanqeeyaha Mawduuca Maqalka Maqalka:
Waxaad si sahlan u xoqin kartaa boggaaga tartankaaga iyo waxaad ka heli kartaa nuxurkiisa falanqaynta ereyga muhiimka ah. Ujeedadaas, waxaad isticmaali kartaa SEMRush oo raadi ereyada muhiimka ah ee ku habboon. SEMRush waa qalab dhamaystiran oo kaydka xogta qalab. Iyada oo la raacayo, waxaad go'aamin kartaa ereyada muhiimka ah ee tartamadaada isticmaalaya. Sidoo kale, waxaad ka heli kartaa muuqaalkiisa dhererka dheer iyo ereyada gaaban ee gaaban iyo in aad boggaaga si fiican u muujiso.
2. Waxqabadka boggaga:
Qalabka SEO iyo adeegyo kala duwan ayaa diiradda saara bogagga iyo keywords keydka wanaagsan. Waa muhiim in xogta xoqdo si loo hagaajiyo waxqabadka guud ee bogaggaaga. Ma rabtaa in aad baabuur badan ku wado website-kaaga ama blog-ka? Google Adwords API waa qalab aad u fiican oo xoqaya xogta oo si sahlan u bogsan boggaga internetka. Sidoo kale, waxay ka caawisaa hagaajinta waxtarka website-kiisa iyo kobcinta darajadaada.
3. Qaadashada Metad-Data:
Kimono Labs and Import. io waa laba muuqaal oo cajiib ah shabakadaha duugoobay . Waxay ka caawiyaan in ay soo saaraan macluumaadka macaamiisha iyo in ay si sahlan u muujiyaan boggayaga internetka. Haddii aad rabto in aad ogaatid sababta sitooska tartameedu u xajisan yahay kanadaada, waxaad isku dayi kartaa mid ka mid ah qalabkani oo aad ku ogaan karto ereyada muhiimka ah ee loogu talagalay boggaaga. Iibsiga. io iyo Kimono, waxaad si sahlan u soo saari kartaa sharraxaadda meta, titles meta, iyo tags tags waxayna hagaajin kartaa waxqabadkaaga boggaaga.
4. Bogagga bogagga ee bogga darajo:
Ujeedada SEO waa in la kordhiyo darajada bogga loogu talagalay ereyada muhiimka ah. Dhamaan websaydhiyadu waxay u baahan yihiin baakad SEO ah sawir gacmeed kuwaas oo ka caawin kara inay hagaajiyaan waxqabadka guud ee goobahooda. Marka xogta si buuxda loo tirtiro, waxaad ku daabici kartaa blog-kaaga oo aad marin kartaa taraafik tayo leh. Waxaad isku dayi kartaa Gawaarida, aaladda saarista macluumaadka oo xoqaya macluumaadka laga helo bogagyo kala duwan adigoon badalin ereyada muhiimka ah ee muhiimka ah. Hal dariiqo oo lagu kordhiyo darajada waa in la ogaado waxa ay tartamayaashu sameynayaan oo ay ku dhajinayaan boggooda internetka.
5. Xiriirin gudaha iyo dibaddaba:
Waa ammaan in la yiraahdo xoqitaanka webka iyo SEO waxay leeyihiin xidhiidh adag. Marwalba waxaad ubaahan tahay xiriirada gudaha iyo dibedda si aad u heshid darajo raadin fiican. Iyada oo Getleft, ParseHub iyo OutWit Hub, kaliya ma kari kari kartid oo aad soo saari kartaa bogaggaaga bogga laakiin sidoo kale waxay dhisaan isku xirnaanta gudaha.
Iyada oo leh qalabaynta shabakadda, waxaad si fudud u qeexi kartaa inta jeer ee ereyada muhiimka ah ee goobtaada tartanka isticmaalay. Waa in ay noqotaa tirada ugu wanaagsan ee ereyada muhiimka ah ee ku jira mawduuca, waxayna kaa caawin kartaa inaad ka fogaato walxaha muhiimka ah. Intaa waxaa dheer, waxaad xoqin kartaa xogta waxtar leh ee laga helo filimada iyo sawirrada. Iyada oo leh nooca saxda ah ee qalabka wax burburiya , waxaad si sahlan u soo saari kartaa macluumaadka sawirrada iyo fiidiyowga fiidiyowga waxana ay kor u qaadi karaan qiimeyntaada ilaa xad. Marka gaaban, shabakadda webka iyo SEO waxay kaa caawin kartaa fahamka sida tartameedu u socoto sare ee natiijooyinka raadinta raadinta Source .